okhokho abantu bethu amabika ekwindla kwasiza ekunqumeni ukuthi isivuno ngonyaka ozayo, onjani sezulu okufanele sikulindele esikhathini ebusika noma entwasahlobo. abantu banamuhla baye balahlekelwa ikhono ngokuzimela sibikezele isimo sezulu, njengoba izinguquko ukuqapha isimo sezulu kanye nentuthuko nemvelo ikakhulukazi ngenxa izindaba. Kodwa zonke izinyanga ekwindla uzophawula izici kanye nokusebenzisa ulwazi mayelana izimpawu, ukuze uthole ulwazi mayelana sezulu ezinsukwini ezizayo nezinyanga.
Folk amabika iwe ngo-September
Ngo-September, njengoba umthetho - ekuqaleni kwenyanga Listopad. Futhi lesi sici bendabuko ingasetshenziswa imibono yabo. abantu abaningi amabika Septhemba enikelwe defoliation. Ngokwesibonelo, uma kusheshe kwaqalwa leaf kuwa, ke kubonisani lwaluyophola singakafiki isikhathi sokufika ekuseni ubusika. Kodwa uma amaqabunga banyukubala ngasekupheleni, kukholakala ukuthi ngonyaka ozayo aqhame ezinkulu zasebusika kuyoba kubanda kakhulu futhi isikhathi eside. Elikhulu abandayo futhi wathembisa defoliation okusheshayo. Ekupheleni kwenyanga ukubheka birch kanye aspen. Uma kungukuthi azungeza ngokuphelele, khona-ke ngonyaka ozayo ngeke bacebe sokuvuna. Kodwa amahlamvu ekuqhubekeni cherry - wuphawu ncibilika. Kusukela ezikhathini zasendulo abantu bebelokhu kubalulekile ukwazi ukuqagela mayelana isivuno ngonyaka ozayo, kukhona ngisho uphawu kazwelonke - kuye ngokuthi indlela wena walala eshidini. Uma wawa okungalungile side up, ke wawuwuphawu ezinhle, kodwa uma okuphambene, khona-ke ungalindi uze sokuvuna.
Folk amabika iwe ngo-Okthoba
Okthoba - Inyanga ebhuqwini imvula, izinyoni uqale Shoals yokwelula kuya eningizimu. Lezi ajwayelekile zonke izimpawu autumn singasebenza njengesisekelo esiqinile sokufinyelela uphawu okuhle noma okubi. Ngokwesibonelo, uma inyoni landizela Wokuvikelwa holidi (ke lugujwa 14 Okthoba), abalimi wayazi ukuthi ngokushesha ekwindla zizodamba futhi akhale ebusika. Uma izinyoni ezifudukayo kukhona ekujaheni bashiye amakhaya abo, isimo sezulu esifudumele, liyokuma ngokusebenzisa ekwindla. Swans Ukuhamba kwakusho iqhwa eliwayo esikhathini esizayo esiseduze, futhi nokufinyelela umnikazi Shoals eningizimu goose - izimvula eside. Ngisho umgwaqo owubhuqu kwaba uhlobo sokuhle. Ngokwesibonelo, kusukela ukuvela kokuqala ukungcola abalwa amaviki 4, futhi ayeka usuku kubhekwa ukuqala ebusika.
Folk amabika iwe ngoNovemba
Le nyanga futhi manje ukuthola isikhathi kwaqedwa Pore ekwindla. Ngosuku lokuqala kukaNovemba, ke wanquma ukuhlola umqhele izihlahla. Uma kwakukhona amahlamvu ke kufanele silindele isivuno ompofu, ngawo unyaka olandelayo kuyoba elambile. Novemba 9 - umkhosi Winter umhlengikazi ophethe, uma uyonika hazy ke ebusika kuyoba efudumele, futhi uma lolu suku frost izihlahla kanye nezindlu, kuyoba abanolaka. Phakathi no-November (noma ukuba enembile, mhlaka-14 Novemba) enquma ukuthi oats freak. Lapho frost abawa ngalolo suku, le imiphumela acebile elindelekile yokuhlwanyela. Kodwa iqhwa noma imvula ngosuku Ivana Milostivogo (Nov 25) libike ukuthi kuze ekubandeni okukhulu namanje kude.
Ukholwa noma ungakholwa?
Russian izimpawu kazwelonke - kuyinto agcina ulwazi abantu, uphawu observation yakhe. Siqine sibe ukuba baqonde indlela umlimi wayengumuntu sincike iyashintsha izimo zezulu, kodwa futhi eduze kanjani ukuthi sasiyingxenye ngesikhathi esifanayo nemvelo. Futhi okubaluleke - izimpawu esekelwe imicimbi, akaphelelwa ngokuhlathulula ukusebenza kwawo, ngakho-ke uma isimo sezulu kuyinto ukungathembani ophikelelayo, nokucabanga ngazo.
Kuyini OMG nendlela ekushintsheni ngolimi lwethu
Abantu amahle kakhulu emhlabeni: umbono uchwepheshe
Umuntu ukubekezela isithwathwa - inganekwane of ubuntu ephelele?
Lújar - Iyini?
Yesigcilikisha 88 - Ukucaciswa, ububanzi futhi isicelo izindlela
Kusukela sizogqokani ijazi ophuzi ngaphandle collar?